Marka la joogo Bodybuiltlabs, waxaan si buuxda u aqoonsan nahay inaad nagu aaminayso inaan ku dhaqano si xirfad leh, anshax leh, iyo xilkasnimo leh markii aad doorato inaad na siiso macluumaad adiga kugu saabsan adoo maraya degelkeenna.
Macluumaad intee le'eg ayay ururisaa Dhismayaasha jirka? Sideen U Isticmaalnaa?
Waxaan codsan karnaa in macluumaadkaaga shaqsiyeed aad adigu na siiso haddii aad iska diiwaangeliso ogeysiis emayl, joornaal, ama adeeg kale. Macluumaadkan waxaa loo uruuriyay ujeedada kaliya ee ah in adiga lagaa siiyo waxyaabo qaas ah oo dano ku saaban Sidoo kale waa la ururin karaa si laguula socodsiiyo ku saabsan soosaarka alaab ama adeeg cusub ama laguugu cusbooneysiiyo dalabyo gaar ah oo laga helo Bodybuiltlabs, waxaadna had iyo jeer dooran doontaa inaadan helin macluumaadkaas.
Annagu ma wadaagno ama ka iibinno macluumaadkaaga cid aan amar ku haysan, weligeenna ma samayn doonno. Si kastaba ha noqotee, waxaan u siideyn karnaa macluumaadka shakhsi ahaaneed sida loo baahan yahay ama loo oggol yahay iyadoo la raacayo sharciyada quseeya ee la jaanqaadaya shuruudaha sharci ama sharciyeed. Waxaan qaadeynaa talaabooyin macquul ah oo aan ku ilaalineyno xogta aan soo aruurineyno ee ku saabsan wax ka bedelka, marinka aan loo fasaxin, shaacinta, ama burburka. Waxaan hirgelineynaa nidaamyo amni oo heer warshadeed oo sugitaan helitaan iyo keydinta macluumaadka. Si kastaba ha noqotee, waxaa nagu qasbi kara inaan siino macluumaadka dowladda ama dhinacyada saddexaad duruufaha qaarkood. Waxaan isku dayeynaa sida ugu fiican ee aan u ilaalineyno macluumaadkaaga laakiin dhinacyada saddexaad ayaa laga yaabaa inay si sharci darro ah u soo galaan ama u farageliyaan isgaarsiinta gaarka loo leeyahay ama idaacadaha, ama isticmaaleyaashu waxay si khaldan u isticmaali karaan ama u adeegsan karaan macluumaadkaaga ay ka soo ururinayaan bartayada.
Waad baari kartaa oo geli kartaa boggayaga internetka adiga oo aan bixin wax macluumaad ah oo shaqsiyeed lagu aqoonsan karo. Si kastaba ha noqotee, waxaan kaa codsan karnaa inaad na siiso macluumaad shaqsiyeed oo gaar ah haddii aad na weydiiso inaan kula soo xiriirno si aad u hesho macluumaad dheeraad ah ama hufnaan ku saabsan alaabtayada iyo adeegyadayada. Macluumaadkan waxaa ka mid noqon kara magac, lambar taleefan, cinwaan, iyo macluumaad kale oo xiriir ah. Adiga oo isticmaalaya degelkeenna internetka, waxaad oggolaatay ururinta iyo adeegsiga macluumaadkan Bodybuiltlabs.
Fadlan ogow inaan xafideyno xuquuqda buuxda oo aan la loodin karin si aan u badalno dhaqankeena (yada) asturnaanta gebi ahaanba ama qayb ahaan, sida iyo markii loo baahdo iyada oo aan la siinin. Waxaan ku dhajin doonnaa isbeddeladaas bogga Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee boggeena haddii ay dhacdo dhacdo noocaas ah. Waxaan kaa codsaneynaa inaad fadlan ka eegtid boggan si joogto ah si aad u hubiso inaad ka warqabto dhaqammadii ugu dambeeyay ee asturnaanta. Faham la'aan ama wacyigelin la'aan ama booqashada boggan ayaa wali loo dhisi doonaa inay sharci ahaan ku khasban tahay dhammaan booqdayaasha bogagga.
Xusuusin Caruurta iyo Waalidiinta
Waxaan ugu tala galnay websaydhka 'Bodybuiltlabs' inay u isticmaalaan dadka waaweyn oo keliya. Dadka qaangaarka ah (da'doodu ka yar tahay 18) xaq uma laha inay adeegsadaan alaabtayada iyo adeegyadayada waxaanan kuu soo jeedin doonnaa inaadan noo soo gudbin wax macluumaad shakhsi ah. Ilmo aan qaangaarin ayaa adeegsigayaga u isticmaali kara oo keliya oggolaanshaha waalid ama ilaaliye, haddii adeegsigaas uu oggolaado sharciga khuseeya.
Waxaan ka bixin karnaa xiriiriyeyaasha bogagga saddexaad. Fadlan la soco inaanan ansixin ama xaqiijineynin waxyaabaha ku jira ama ku dhaqmida asturnaanta bogagga aan ka mid ahayn Bodybuiltlabs ee aan ku xiri karno. Booqashada boggooda (shabakadahooda) waxay ku jirtaa qatar adiga u gaar ah waana inaad si buuxda dib ugu eegtaa ka hor intaadan isticmaalin ama u siinin wax macluumaad shakhsi ah iyaga.
Waxaad ogolaatay inaad difaacdo, magdhow siiso, oo aad kahesho Dhismaha Dhismayaasha iyo la-hawlgalayaasheeda kuwo aan waxyeello u lahayn dhammaan iyo dhammaan deymaha, kharashyada iyo kharashyada, oo ay ku jiraan khidmadaha macquulka ah ee qareennada, ee la xiriira xadgudub kasta oo Shuruudaha iyo Xaaladaha adiga ama dadka kale ee isticmaala koontadaada. Dhammaan waxyaabaha ku daabacan ama haddii kale marin looga heli karo degelkan waxaa ilaaliya xuquuqda daabacaadda. Si kale looma isticmaali karo, lama daabici karo, dib looma gudbin karo, dib looma soo saari karo, ama lama baahin karo iyadoo aan la helin ogolaansho qoraal ah oo qoraal ah ee qofka iska leh (s)
Haddii aadan ku raacsaneyn shuruudahan iyo shuruudahan, waxaa lagaa codsaday inaadan marin goobta ama aanad kala soo baxin wax Mawduuc ah.